AHOANA IRETO PUB ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA ERAKY NY TANANA IRETO?
Par: fa ahoana
Date: 15 juin 2017 - 07:45
AHOANA IRETO PUB ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA ERAKY NY LALANA IRETO?
Fanetriben'ny firenena mitovy @ireo heloka hafa toy ny fanodinkondinana volam-bahoaka tompoko ny fitaomana olona hisotro zava-pisotro misy alikaola @ fomba mivantana na ankolaka toy ny doka varotra eny @ arabe ireny!
Tena betsaka izy ireo izao, dia ho potika ny taranaka raha izao no mitohy. Tadidiko tsara taona vitsy lasa izay fa tena tsy azo atao mihitsy ny manao pub mikasika ireny!
Re: AHOANA IRETO PUB ZAVA-PISOTRO MISY ALIKAOLA ERAKY NY TANANA IRETO?
Date: 15 juin 2017 - 08:45
Iza no tsy mandray ny andraikiny amin'izany?
Par: dtsaiko a
Date: 15 juin 2017 - 09:20
Tena tsy haiko rangah hoe iza no tsy mandray andraikitra a! matoa aloha ireny mipetraka eny dia mandalo ambaratonga maromaro, ary mandoa hetra. Na toaka, na labiera dia misy lalàna mifehy fa dia gaga elah e!
Any @ tany izay fakan-tsika tahaka sy efa mandroso ireo dia tsy mahazo mividy sy misotro zava-pisotro misy alikaola ny ankizy -18 ans ny sasany aza -21 ans.
Ny eto Madagasikara nefa dia ankizy 12-13 ans, sady izay indray betsaka mihitsy ny sipa kely mamo an-dalana tsy mahalala menatra intsony, rehefa misy fetifety kely!
Dia izany ve no antenaina ho avin'ny firenena?
Manentana ny tomponandraikitra isan-karazany mba handray andraikitra fa tena ho simba eto isika mianakavy!
Andefasan'ny vazaha an'izao poizina rehetra izao dia faly ery, avy eo robainy mora fotsiny!
Date: 15 juin 2017 - 09:21
Izao no atao hoe : FANJAKAN' I BAROA !
Par: lilasoua liana
Date: 15 juin 2017 - 11:57
ny vazaha angaha ry dtSaiko no mampiditra ny toaka any am-bavanareo ? ny any efa matin'ny fahantràna, mosary , tsy fahamiantsakafo fa ny toaka gohana foana pfff
Date: 15 juin 2017 - 15:20
Efa nazavain'i Belapin atsy ambadika atsy io fa ny Kristianisme no nahatonga, mahatonga sy hampiroborobo an'io e..
Date: 15 juin 2017 - 17:04
Fa ahoana >>>
Taona vitsy lasa tokoa izay dia tsy azo natao ny Pub sur les boissons alcoolisés. Fa nony noesorina teo ilay nanao ny lalàna ary nony lasa monopole ny toaka sasany eto, dia niverina tokoa ny fanjakan'ny Baroa.
Nosisihana vola be ve ary ny tompon'andraikitra ?
Par: Za malagasy
Date: 15 juin 2017 - 17:06
Africana Beer's cavabe cava be ...
A chacun sa biere
Tena ny zanako kely 8 ans indray no mahay tsianjery an'ilay pub le ...
Date: 15 juin 2017 - 18:36
Inona moa no azon 'ny mpitondra hatao amin'izany satria ireo mpamokatra sy mpivarotra toaka sy sigara ireo anie no mampidi bola be indrndra amindry zareo ,eo anoloan'ny douane e .Vola be tsitokotsiforohana no omen'ireo ho an'ny ambony tsirairay ,akoatra ny miditra ao amin'ny kitapombolam panjakana .
Ny mangina volamena hono ,laissons l'avenir venir ,ce qui vivra verra .
Date: 16 juin 2017 - 08:08
Mba miangavy anareo solombavambahoaka tompoko hamolavola lalàna mandràra ny zaza Malagasy -18 ans tsy anjifa sy misotro zava-pisotro misy alikaola labiera sy toaka ary ny forongony rehetra!
Izany no tena mariky ny fitiavan-Tanindrazana (Taninjanaka) tadiavinay vahoaka @areo ireo!
Misaotra mialoha Tompoko!!!!
Date: 19 juin 2017 - 13:46
tokony foanan'ny governemanta ty licence na Epi-bar ity fa io no tena mampitobo be ny debits na alcool eran'ny tanàna.
licence an Bar ihany no tokony omena ary atao ambony be ny vola aloha aminy.
Par: Ny vahoaka no mandatsaka ankady ny gasy
Date: 20 juin 2017 - 22:55
fa angaha tsy mety raha misotro izay ampy taona te hisotro de izay tsy ampy taona tsy tokony hisotro mba tsy misotro.
Raha misy moa tsy ampy taona misisika hisotro dia lalanampiainana izany. Saonjo iray lohasaha.
Fa tsy isakiny misy zavatra kely izao de foano ty foano ry foano itsy
maninona tsy zanak ialahy no tenenina fa ny epi bar no hofoanana.
efa tsy hisy ninoninona azo atao intsony madagasikara fa ty tsy azo atao iry tsy azo atao , savaina etsy savaina eroa izao koa hoe foano foano
Le vahoaka sasany mihintsy no kely loha tokony hofohanana fa tery saina ka mandrebireby.
Date: 21 juin 2017 - 10:03
Tena mpivaro-toaka io razoky eo amboniko leaza a!!! raha tsy lasa mamolava angamba ny zanany tsy ho tonga saina izy!
Ny ankizy lety @ maha ankizy azy tsy mbola mahalala izay hahafaty azy fa tia manandrana a! fa rehefa lalàna mihitsy no misy dia saziana izay mandika azy, izay vao mety ho foana ny fisotron-toakan'ny ankizy tsy ampy taona!
Date: 21 juin 2017 - 10:05
Fanontaniana apetrako aminao, t@ izany fotoana tsy azo nanaovana pub alikaola izany, tsy nisy pub eraky ny tanàna, DIA FOANA VE NY FISOTROA-TOAKA ????? TSIA angamba ny valin'ny fanontaniana.
Fanontaniana faharoa, ny pub ve no manentana ny vahoaka hisotro, asa na hitanao fa tsy maintsy misy soratra eo ambany eo hoe "ATTENTION, L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTé !!!", efa fantatrao izany izay soratra izay alohan'ny hisotroanao.
KA MBOLA ASAKASAK'IZAY MISOTRO fa tsy ny publicité mihitsy no mahatonga ny olona hisotro, arak'ilay message-nao mantsy dia ny pub no fositra. Tsy ny pub no fositra, sy tsikeraina fa ilay mpisotro no tsikerao, na misy pub eo na tsy misy, hisotro foana ilay mpisotro.
Date: 21 juin 2017 - 15:19
Hita be fa tena mivilana tanteraka ianao ry Bonus. Tsy mahagaga fa pédé ianao. Tean tsy ampy fisainana ary tsy ampy fahalalana.
Mampiseho ampahibemaso koa ianao fa tsy nianatra firy. Hany ka tsy fantatrao ny andraikitry ny dokam-barotra eo amin'ny fiainan'ny olona. Raha tsy misy vokany ny Pub, tsy nataon'ny olona. Na izay fotsiny aza dia tokony ho takarin'ny sainao.
Tsy mila mandeha mitady fanazavana lalina satria tsy ho takatrao velively, na handeha amin'ny tany hatramin'ny lohanao aza.
Date: 22 juin 2017 - 13:15
Ny manao PUB tompoko dia vola be an-tapitrisany maro mihitsy, na spot @ radio sy tele io na tableau publicitaire.
Ary misy études approfondies mihitsy fa tsy ataotao foana, raha tsy misy dikany ny PUB tsy hisy olona handany volabe @zany.
Ny ankizy no tena mampalahelo voasarika @ fisotrona, fa ianao olon-dehibe io na toaka aza no handrahoanao vary sy laoka ary ataonao rano fisotro dia responsable ianao.
Mba jereo anie fa izay pub mandeha @ tele na tsy fantatry ny ankizy kely 02 ans aza dia arahany e! dia toy izany koa ny effet-n'io pub io @ adolescent.
Ny mpivaro-toaka ihany no mahita ny fahatsaràn'ny pub-na toaka, fa raha olona manan-janaka ary mandinika dia tsy hanaiky an'izany mihitsy!!!!
Par: croix orange
Date: 22 juin 2017 - 18:26
Jiolahimboto indroa misesy izay no atao prezda teto dia inona no mahagaga @ izany eh, raiso hoa ny kiho ry gasy a,